Booliska oo faah faahiyay khasaaraha ka dhashay qaraxa Muqdisho | Baidoa24.com
Home WARARKA MAANTA Booliska oo faah faahiyay khasaaraha ka dhashay qaraxa Muqdisho
Qaraxaan oo la sheegay in uu ahaa qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa waxaa lagu weeraray Maqaayada Luul Yemeny oo ku taalla Agagaarka degmada Weyn ee Degmada Xamar Jajab Gobolka Banaadir.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in Ruuxa isku soo xiray waxyaabaha qarxa ay Albaabka ka celiyeen Ilaalada Maqaayada,hayeeshee uu is qarxiyay,waxaana ka dhashay dhimashada labada kamid ah ilaalada Maqaayada iyo qofkii is qarxiyay.
Ciidamo ka tirsan Booliska iyo kuwa Asluubta oo goobta ka dhowaa ayaa u diiday warbaahinta inay tagaan halka uu qaraxa ka dhacay si ay u soo gudbiyaan khasaaraha ka dhashay walow saacado kaidb loo ogolaaday.
Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sadiiq Adan Cali (Duudishe) ayaa sheegay in Ruuxa is qarxiyay uu doonayay in uu gudaha u galo Maqaayada, balse ay u diideen ilaalada,isla markaana uu banaanka maqaayada ku qarxay.
Waxaa uu sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen Saddex Ruux oo kala ah laba kamid ah Ilaalada Maqaayada iyo qofka is qarxiyay, halka ay ku dhaawacmeen laba Ruux oo Shacab ah oo goobta ka agdhowaa.
Previous articleSoomaaliya oo si rasmi ah u fureysa duulimaadyada caalamiga ah
Next articleGanacsatada Qaadka Dalka Kenya oo Khasaaro Kale la Kulmay